Media Campaign Against Covid19 -
अहिले अक्सिजन नपाएर औषतमा हरेक १० मिनेटमा नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । निर्दोष जनताका ‘हत्या’ को जिम्मेवारी कसले लिने ? अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सबै कुराको जिम्मेवारी दिएर सरकार पन्छिन मिल्छ ? काठमाडौँ — भारतमा दुई महिना अघिदेखि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिन थाल्यो । भारतीयहरु उक्त दोस्रो लहर बेलायतबाट आफ्न...
बुटवल - सामान्यतया बिरामी अस्पताल पुगेपछि बाचिने भइयो भनेर ढुक्क हुन्छ। पूर्वाधार, औषधी र चिकित्सकको उपलब्धताले बिरामीमा जीवनप्रतिको आसा जाग्छ। तर, अहिले अस्पताल पुगेका बिरामीमा सबैभन्दा बढी तनाव र बेचन छ। कोरोना संक्रमित भएका बिरामीले सुविधा सम्पन्न भनिएका अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि बारम्बार तनाव झेल्नुपरेको छ। त्य...
अहिले अक्सिजन नपाएर औषतमा हरेक १० मिनेटमा नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । निर्दोष जनताका ‘हत्या’ को जिम्मेवारी कसले लिने ? अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सबै कुराको जिम्मेवारी दिएर सरकार पन्छिन मिल्छ ? काठमाडौँ — भारतमा...
सुदूरपश्चिमका चिकित्सक भन्छन्- सरकारले अक्सिजन व्यवस्था गरिदिए धेरैलाई बचाउन सकिन्छ
चीनबाट आयो ४ सय वटा अक्सिजन सिलिन्डर
कोरोनाविरुद्ध सघाउन आग्रह गर्दै साझेदार निकायहरूलाई मन्त्रालयको पत्र
दैलेखमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु
जगरनाथपुरको एउटै वडाका १ सय ७३ जनामा ज्वरो
पछिल्लो १० दिन नेपाल बसेका व्यक्ति बेलायत जान नपाउने, माल्दिभ्सले रोक्यो वर्कपरमिट
कोरोना प्रभावित स्थानबाट फर्किनु भएका यात्रुहरूले ध्यान दिनु पर्ने कुरा
Health And Population Minister Bhanu Bhakta Dhakal Interview About Preparedness
Katwal Radio Magazine EP-82
Katwal Radio Magazine _EP-81
Katwal Radio Magazine EP-62
पोखरा घटनाका विरुद्धमा “दलित नागरिक राष्ट्रिय अभियान”
कोभिड १९ बारे HAMI को विज्ञप्ति
कोरोनाबाट दोहोरो जोखिममा दलित, सिमान्तकृत र विपन्न : ICDR